Riyadii Manchester United Ee Harry Kane Oo Dhamaatay Kaddib Isku-dhacii Solskjaer Iyo Jose Mourinho - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaRiyadii Manchester United Ee Harry Kane Oo Dhamaatay Kaddib Isku-dhacii Solskjaer Iyo Jose Mourinho
Riyadii Manchester United Ee Harry Kane Oo Dhamaatay Kaddib Isku-dhacii Solskjaer Iyo Jose Mourinho
April 13, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Murankii dhex maray Jose Mourinho iyo Ole Gunnar Solskjaer ayaa dilay fursaddii ay kooxda Manchester United u haysatay in ay kula soo saxeexato weeraryahanka reer England ee Harry Kane.
Gool-dhaliyaha Tottenham ee Kane ayaa lala xidhiidhinayay in uu tegi doono Red Devils, kaddib markii uu shaaciyey in uu mustaqbalkiisa go’aan ka gaadhi doono marka ay soo dhamaadaan ciyaaraha Euro 2020 ee xagaaga.
Sida uu qoray wargeyska The Sun toddobaadkii hore, guddoomiyaha Spurs ee Daniel Levy ayaa ka gaws-adaygaya in uu Kane ka iibiyo koox Premier League ay ku xafiiltamayaan, laakiin warar kale oo soo baxay ayaa tibaaxay in United ay si dhab ah u xiisaynayso xiddigan lagu qiimeeyey £150 milyan ee Gini.
Xiisahaas ayaa hadda soo dhamaaday, kaddib markii ay warbaahinta isku weerareen macallinka Tottenham ee Jose Mourinho iyo dhiggiisa Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer markii ay soo dhamaatay ciyaartii Axaddii ay Red Devils 3-1 ku garaacday Spurs.
Labada tababare ayaa isku dhacay waqti ay marayeen waddada garoonka ka baxda ee qolka lebbiska kusii socota, waxaana cadhada ugu badan ka muuqatay Jose Mourinho oo ka gadooday hadal uu tababare Solskjaer ku weeraray Son Heung-Min oo uu ku tilmaamay mid saddex daqiiqadood macle la’aan iskaga jiifay, taasina keentay in la diido goolkii uu Edinson Cavani ku furay kulankaas.
Solskjaer oo warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi: “Haddii wiilkaygu uu saddex daqiiqadood dhulka jiifo, uuna u baahan yahay in 10ka saaxiibbadii ahi kiciyaan, wax cunto ah ma helayo.”
Jose Mourinho oo hadalkaas ka jawaabay ayaa isaguna telefishanka u sheegay: “Kaliya waxaan odhanayaa, Sonny aad ayuu u nasiib badan yahay, sababtoo ah, wuxuu haystaa aabbo ka wanaagsan Ole.”
Isku-dhaca labadan tababare ayaa saamayn ku yeelatay xidhiidhka labada kooxood iyo qalbi-samaantii aan marka horeba jirin ee ka dhex-jirtay, waxaanay soo afjartay riyadii Manchester United ee ahayd in ay la saxeexato Harry Kane.
Wargeyska The Sun ayaa waxa kale oo uu sheegay in labada kooxood aanay hadda wada-hadal ka geli karin ciyaartoygan, xidhiidhkii u dhexeeyeyna uu si aad ah hoos ugu dhacay.